. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: အထီးကျန် ကန္တာရ
နင်သူ့ကိုချစ်ခဲ့လား .. ဟင့်အင်း .. သူမခေါင်းခါလိုက်တယ် .. ဟုတ်တယ် မချစ်ခဲ့ဘူး .. ချစ်ဖို့လည်းမစဉ်းစားမိဘူး .. ဘယ်တော့မှလည်း ချစ်မှာမဟုတ်ဘူး .. သူမခေါင်းကို တွင်တွင် ခါရမ်းလိုက်တယ် ..
သူမ အမြင်တွေေ၀၀ါးလာတယ် .. အလန့်တကြား မျက်နှာကို စမ်းကြည့်လိုက်မိချိန်မှာ သူမ ပါးပြင်မှာ မျက်ရည်တွေ .. ဘာလို့ကျရတာလဲ .. သူမသိပ်မုန်းတဲ့ မျက်ရည် .. အရှုံးပေးချင်နေတဲ့ အဓိပ္ပါယ် .. ဟင့်အင်း .. သူမ မရှုံးချင်ဘူး .. ခု သူမနိုင်လိုက်ပြီ .. ဒါကြောင့် ဒီမျက်ရည် ကျစရာမလိုတော့ဘူး .. ရီလိုက်စမ်းပါ .. ၀မ်းသာအားရ ရီလိုက်ပါ ..
သွန်း အိမ်ပြန်မှာမလား .. ကျွန်တော် လိုက်ပို့ပေးမယ် .. ပြောပြောဆိုဆို သူကောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ယူပြီး သူ့ကားဆီကို လျှောက်သွားလိုက်တယ် ..
ဟင့်အင်း .. သွန်းမလိုက်ချင်ပါဘူး .. ခုမှ တစ်ခါသာမြင်ဘူးသေးတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ကားပေါ်တက် လိုက်သွားဖို့ မရဲတင်းသေးဘူး .. သွန်းနောက်က အပြေးလေး လိုက်သွားရင်း ..
သွန်းနဲ့ သူနဲ့ သိခဲ့တာ ၃နှစ် ပြည့်ခါနီးပြီ .. သွန်း သူ့အနားမှာ အရင်လိုပဲ ရှိဆဲပါ .. သူကလည်း အရင်ပုံစံအတိုင်းပဲ ရှိနေဆဲပါ .. သွန်းသူ့ကို ချစ်ပေမယ့် သွန်းဦးနှောက်က လက်မခံခဲ့ဘူး .. သွန်းက သူ့အပေါ် မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အနားမှာ နေနေတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတဲ့ အထင်ကို နှလုံးသွေးနဲ့ ရင်းပြီး ချေဖျက်ပစ်ရမယ် .. သွန်းဟာ သူမမြင်ဘူးသေးတဲ့ ခေါင်းမာ မာနကြီးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတာ သူသိစေရမယ် .. သွန်း ဒီလိုလုပ်လို့ သူခံစားရမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သူသွန်းကို အထင်သေးမိတဲ့အတွက် ရတဲ့ အပြစ်ဒဏ်လို့ သွန်း နာမည်တပ်မယ် .. ဒီလောက်တော့ သူခံစားပါစေ .. သွန်းကိုယ်တိုင်တောင် ကိုယ့်ရင် ကိုယ်ခွဲ နှလုံးသွေးနဲ့ရင်းလိုက်ရတာပဲလေ ..
အားတင်းရင်း မျက်ရည်တွေ တွေတွေကျ
လှည့် မကြည့်နဲ့ လုံးဝ အရှုံးမပေးနဲ့ ..
"သွန်း သတိထား .."
ကျမ သတိထားမိလိုက်ချိန်မှာ ကားတစီး အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ .. နောက်ဆုံး သိလိုက်တာက ကျမ တကိုယ်လုံး ပစ်လဲသွားတယ် .. ပလက်ဖောင်းနဲ့ အရှိန်ပြင်းပြင်းဆောင့်မိတဲ့ဒဏ် .. အို .. ကျမ သေတော့မလား ..
ဘေးနား လူတွေဝိုင်းလာပြီး ကျမကို တွဲကူထူကြတယ် .. ဒါဆို ကျမ မသေလိုက်ဘူးပေါ့ ..
"ကလေးမ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးနော်" .. ဘေးနားက စကားတခွန်း ..
ကျမ ကြောင်အစွာ ခေါင်းညိမ့်မိတယ် .. လမ်းလယ်ခေါင်မှာလဲ လူတွေ စုလို့ .. အဲဒီနား သွားမလို့ အပြင်မှာ ..
"သမီး မသွားနဲ့ .. အဲဒီမှာ သမီးကို တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ကောင်လေး ကားတိုက်ခံလိုက်ရတာ .. သမီး သွားမကြည့်တာ ကောင်းမယ်ထင်တယ် .."
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/25/2011 12:04:00 AM